Andraso amim-pitokiana ny Tompo
Naseho ny : 15 desambra 2019
15 desambra 2019 - Alahady faha-3 amin'ny fiavian'i Kristy.
Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 11, 2-11.
Antomotra ny Noely, izay fotoana lehibe ho an'izao tontolo izao, satria Izy Andriamanitra amin'ny alalan'ny Zanany no miditra eo amin'ny tantaram-piainantsika olombelona, hitondra fanavotana sy fiainam-baovao mba hahatonga ny Fanjakany ao am-pon'ny tsirairay sy ao amin'ny fiainantsika olombelona.
Tsy nohenoin'izy ireo na i Joany na ny Zanak'olona
Zoma 13 desambra 2019 - Herinandro faharoa amin'ny Fiavian'ny Tompo.
Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 11, 16-19.
Avia ry Tompo, vangio am-piadanana izahay ka hifalianay amin'ny fo lavorary.
Pejy 79 amin'ny 82